Ndepụta Kildare - IntoKildare
48 nsonaazụ (s)
Nke mara mma ma nwee ntụsara ahụ na ọkaibe, The Carriage House na-ejikọta ikuku nke ebe obibi mara mma, ikpo ọkụ nke ezigbo nnabata Irish na ụdị enweghị mbọ nke ebe nzukọ ọgbara ọhụrụ. […]
Otu n'ime ọnụ ụlọ iri ihe kacha mma na mba ahụ, Morrison Room abụrụla obi mmekọrịta nke Carton House ihe karịrị afọ 200. Ndị otu na-eto eto na ndị nwere oke agụụ na Carton […]
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Barton Rooms dị na Barberstown Castle na-enye ọkwa ụlọ pụrụ iche nke Barberstown Castle ugbu a yana akụkụ akụkọ ihe mere eme nke nnukwu ụlọ. Aha ụlọ oriri na ọṅụṅụ sitere na […]
Nri nke Bistro Grill
The Bistro Grill na Killashee Hotel na-eji ihe kacha mma nke mpaghara na efere dị mfe ma na-emepụta ihe n'ebe dị jụụ dị egwu. Nwee obi ụtọ na otu n'ime ha mara mma […]
N'ịbụ nke dị na Clubhouse na Kilkea Castle, Bistro bụ ebe magburu onwe ya iji soro ndị enyi rie nri na ikekwe ọbụna mmanya. Bistro agaala […]
Ma ị na-eleta ụbọchị ahụ ma ọ bụ na-ezumike ogologo, chọpụta obodo na obodo nta nke Kildare na Go Rentals Car Hire.
ụlọ oriri na ọṅụṅụIme ụlọ naanị
Kafe na-enweghị oge
Kafe na-adịghị agafe agafe dị na obodo Kilcock mara mma. Ma ọ bụ nri ụtụtụ, nri ehihie ma ọ bụ ikekwe ọbụna brunch, Kafe na-adịghị agafe agafe bụ ebe ị ga-eji menu mara mma juputara […]
Bike m ma ọ bụ Hike m na -enye njem nlegharị anya nke na -apụ n'ụzọ amabeghị, na -ebuga ya n'ụzọ na -adigide, yana ezigbo ọkachamara mpaghara.
ụlọ oriri na ọṅụṅụBed & Breakfast
Otu ụlọ oriri na ọ familyụ familyụ ezinụlọ dị n'etiti obodo Kildare.
Ụlọ akwụkwọ ọzụzụ mba maka ụlọ ọrụ ndị na -agba ịnyịnya na Irish na -enye nkuzi maka ndị na -agba joke, ndị ọrụ kwụsiri ike, ndị na -azụ ụgbọ ịnyịnya, ndị na -azụ anụ na ndị ọzọ so na mpaghara nke ọma.
Mgbapụta GlennGorey bụ “ụlọ ahịa nkwụsị” maka nfuli mmiri niile & mkpa nrụnye